Leak သတငျးတှအေတိုငျး ပှဲထှကျလာတဲ့ OG Dota2 – Gaming Noodle
Leak သတငျးတှအေတိုငျး ပှဲထှကျလာတဲ့ OG Dota2
TI8 နဲ့ TI9 ခနျြပီယံ OG Dota2 ရဲ့ TI10 ကို စိနျချေါမယျ့ လူစာရငျးကတော့ ဒီရကျပိုငျးထှကျနတေဲ့ ကောလာဟလ သတငျးတှအေတိုငျးပဲ ပှဲထုတျလာပါတယျ။
နာမညျထှကျပွီးသား “Saksa” ကတော့ JerAx ရဲ့ Position4နရောမှာ ဝငျရောကျကစားသှားမှာပါ။ အသကျ ၂၄ နှဈသား မကျဆီဒိုးနီးယား နိုငျငံသားဟာ OG မရောကျခငျ NiP မှာလညျး ppd နဲ့ အတူ ၁ နှဈခနျ့ တှဲဆော့ဖူးပါတယျ။ သူဟာ TI6 Grand Final မှာ Wing Gaming ကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ W33 တို့ရဲ့ Digital Chaos အသငျးသားတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈယောကျကတော့ “MidOne” ပါ။ သူကတော့ အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးစရာ လိုမယျမထငျပါဘူး။ Fnatic နဲ့ Team Secret တို့မှာ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဒီ ၂၃ နှဈသား မလေးလူမြိုးရဲ့ Mid Role တဈပေါကျကတော့ လြှမျးလြှမျးတောကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထူခွားတာကတော့ သူဟာ OG မှာ Offlane နရောကနေ အသုံးတျောခံရမှာပါ။ Ramze666 တို့လညျး Carry နရောကနေ Offlane ကို ပွောငျးဆော့ပွီး အောငျမွငျနတောမလို့ MidOne ရဲ့ Offlane ကို စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
OG ရဲ့ လူစာရငျးအပွညျ့အစုံကတော့
1. SumaiL 🇵🇰
2. Topson 🇫🇮
3. MidOne 🇲🇾
4. Saksa 🇲🇰
5. N0tail 🇩🇰
တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလူစာရငျးဟာ လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ ၃ ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ ESL LA Major ရဲ့ Open Qualifier မှာ စတငျယှဉျပွိုငျမှာပါ။
နောကျဆကျတှဲသတငျးအနနေဲ့ OG က ထပျမံကွညောခကျြတဈခု ရှိပါသေးတယျ။ ဒါကတော့ အမြားမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အတိုငျး နာမညျကွီး player/streamer “Gorgc” ကလညျး OG ကို ရောကျသှားပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ Player အနနေဲ့တော့ မဟုတျပါဘူး။ OG အမှတျတံဆိပျအောကျကနေ Streamer တဈယောကျအဖွဈ ချေါယူလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Twitch ရဲ့ လူကွညျ့အမြားဆုံးနဲ့ ဖြျောဖွမှေု အပေးနိုငျဆုံး Dota2 streamer တဈဦးဖွဈတဲ့ Gorgc ဟာ N0tail နဲ့ Ceb တို့နဲ့ ခငျမငျနတေဲ့အပွငျ Dota2 ပရိသတျ အခိုငျအမာ ရရှိပွီးသားမလို့ OG ရဲ့ ကောငျးသော ချေါယူမှု တဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သခြောတာတဈခုကတော့ အခု OG နဲ့ ထပျမံပူးပေါငျးလိုကျတဲ့ SumaiL, MidOne, Saksa နဲ့ Gorgc တို့ဟာ OG ရဲ့ အရှိနျအဝါကို ပိုမို ဆှဲတငျပေးနိုငျမယျ့ ကစားသမားတှဖွေဈမှာ အသအေခြာပါပဲ ခငျဗြာ။
Leak သတင်းတွေအတိုင်း ပွဲထွက်လာတဲ့ OG Dota2
TI8 နဲ့ TI9 ချန်ပီယံ OG Dota2 ရဲ့ TI10 ကို စိန်ခေါ်မယ့် လူစာရင်းကတော့ ဒီရက်ပိုင်းထွက်နေတဲ့ ကောလာဟလ သတင်းတွေအတိုင်းပဲ ပွဲထုတ်လာပါတယ်။
နာမည်ထွက်ပြီးသား “Saksa” ကတော့ JerAx ရဲ့ Position4နေရာမှာ ဝင်ရောက်ကစားသွားမှာပါ။ အသက် ၂၄ နှစ်သား မက်ဆီဒိုးနီးယား နိုင်ငံသားဟာ OG မရောက်ခင် NiP မှာလည်း ppd နဲ့ အတူ ၁ နှစ်ခန့် တွဲဆော့ဖူးပါတယ်။ သူဟာ TI6 Grand Final မှာ Wing Gaming ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ W33 တို့ရဲ့ Digital Chaos အသင်းသားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ “MidOne” ပါ။ သူကတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ Fnatic နဲ့ Team Secret တို့မှာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဒီ ၂၃ နှစ်သား မလေးလူမျိုးရဲ့ Mid Role တစ်ပေါက်ကတော့ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူခြားတာကတော့ သူဟာ OG မှာ Offlane နေရာကနေ အသုံးတော်ခံရမှာပါ။ Ramze666 တို့လည်း Carry နေရာကနေ Offlane ကို ပြောင်းဆော့ပြီး အောင်မြင်နေတာမလို့ MidOne ရဲ့ Offlane ကို စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
OG ရဲ့ လူစာရင်းအပြည့်အစုံကတော့
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူစာရင်းဟာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် ESL LA Major ရဲ့ Open Qualifier မှာ စတင်ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ့ OG က ထပ်မံကြေညာချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ အများမျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း နာမည်ကြီး player/streamer “Gorgc” ကလည်း OG ကို ရောက်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Player အနေနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ OG အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကနေ Streamer တစ်ယောက်အဖြစ် ခေါ်ယူလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Twitch ရဲ့ လူကြည့်အများဆုံးနဲ့ ဖျော်ဖြေမှု အပေးနိုင်ဆုံး Dota2 streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gorgc ဟာ N0tail နဲ့ Ceb တို့နဲ့ ခင်မင်နေတဲ့အပြင် Dota2 ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိပြီးသားမလို့ OG ရဲ့ ကောင်းသော ခေါ်ယူမှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အခု OG နဲ့ ထပ်မံပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ SumaiL, MidOne, Saksa နဲ့ Gorgc တို့ဟာ OG ရဲ့ အရှိန်အဝါကို ပိုမို ဆွဲတင်ပေးနိုင်မယ့် ကစားသမားတွေဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ ခင်ဗျာ။